Amanqaku okuQhathaniswa kwamanqaku kwiiyunivesithi zaseCal State
UMTHETHO Ulinganisa ukufakwa kwi-Cal State
Ukuba uyazibuza ukuba unomsebenzi we-ACT izikolo ozakufuna ukuba ungene kwenye yezikolo zaseCalifornia State University , nolu luhlu oluxhaseneyo nolunye uhlangothi lwama-score kubafundi abaphakathi ababhalisiweyo be-50%. Ukuba izikolo zakho ziwela ngaphakathi okanye ngaphaya kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwenye yeeyunivesithi zikarhulumente ezingama-23 kwi-Cal State system.
I-Cal State ACT Ukulinganiswa kwamanqaku (phakathi kwama-50%)
Bakersfield - - - - - - ubone igrafu
Cal Maritime - - - - - - ubone igrafu
Cal Poly Pomona 20 27 19 26 20 28 ubone igrafu
Cal Poly San Luis Obispo 26 31 25 33 26 32 ubone igrafu
Islands Islands - - - - - - ubone igrafu
Chico 19 24 17 24 18 24 ubone igrafu
EDominguez Hills - - - - - - ubone igrafu
East Bay - - - - - - ubone igrafu
Fresno 16 22 15 22 16 22 ubone igrafu
Fullerton 19 24 18 24 18 25 ubone igrafu
Humboldt State 18 24 17 24 17 24 ubone igrafu
Long Beach 20 26 19 26 19 27 ubone igrafu
ilos Angeles 15 20 14 20 16 21 ubone igrafu
Monterey Bay - - - - - - ubone igrafu
Northridge 16 23 15 22 16 23 ubone igrafu
Sacramento 17 22 15 22 17 23 ubone igrafu
San Bernardino 16 20 14 19 16 20 ubone igrafu
State of San Diego 23 28 22 28 23 28 ubone igrafu
State of San Francisco 18 24 16 24 17 24 ubone igrafu
State of San Jose 20 25 18 25 18 26 ubone igrafu
ESan Marcos 18 23 17 23 17 24 ubone igrafu
State Sonoma 19 24 18 24 18 24 ubone igrafu
Stanislaus - - - - - - ubone igrafu
Qaphela, ewe, ukuba ii-ACT izikolo ziyingxenye enye yesicelo. Amagosa avumelekileyo kwi-Cal State aya kukhangela irekodi ephakamileyo yesikolo, umsebenzi okanye amavavolontiya, isincoko esihle, kunye nemisebenzi eyenziweyo yecandelo elongezelelweyo . Yaye ukhumbule ukuba i-25% yabafundi abhalisele phantsi bafumana amanqaku angaphantsi kwezi zigaba - ukuba unemivuzo ayigqibekanga, usenalo ithuba lokuvunyelwa, ngaphandle kokuba zonke izicelo zakho zizinzile.
Ukuze ufumane ingcamango ebonakalayo yilezi zinombolo zithetha ntoni, nqakraza kwi "khangela igrafu" iqhagamshela ngakwesokudla kumqolo ngamnye. Kulapho, uya kufumana igrafu yendlela abanye abafake izicelo abaye bafumana ngayo - bangaphi abantu abaye bavunyelwa, banqatshelwe, okanye babalwe, kwaye nawaphi amanqaku abo amabakala / iimvavanyo ezilinganiselweyo. Kwezinye iimeko, uya kufumana ukuba abafundi abathile abanamanani aphezulu abazange bangeniswe esikolweni, kunye nabafundi abanamanani amanqaku abancinci abanjelwe. Oku kubonisa ukuba nangona amanqaku aphantsi, ukuba zonke izicelo zakho zinamandla, unako ukuvunyelwa.
Unokuphangela kwakhona ezinye izixhumanisi ze-ACT (okanye i- SAT links ):
Ngaba kufuneka ndibuyisele umThetho?
UMTHETHO Ulinganisa Ukwamkelwa kwiiKholeji eziphezulu zaseWashington
Ndicinga ukuba kukho Iphutha Ngomdlalo wam MSEBENZI!
UMSEBENZI weeMathematika zeMatriki, uMxholo kunye nemibuzo
Iingcebiso ezi-5 zokukhuthaza ukuba umThetho ophuculweyo ubhale amanqaku ovavanyo
Phakamisa Umthetho Wakho iMatriki kwi-5 elula
Uvavanyo lwe-ACT 101
I-Top 10 ye-Best Best Artist Grammy Award Winners
Uhlengahlengiso lwe-14 lweNkundla ePhakamileyo
Imbali emfutshane ye-Whaling
Imbali emfutshane yeNgxelo yeBhanki emva koMsebenzi omtsha
Iingcebiso ezi-5 eziphezulu zokufumana iRhafu yakho yeRhafu ngokukhawuleza
101 Qhathanisa kunye nemixholo yeeNtloko
I-Comedic Female Monologue evela "Ukulala Ubuhle Nezilwanyana"
ISigama sokutya isigama
Amanzi oMlilo aBantwana